Weeraradii Sacuudiga: Trump wuxuu ku eedeeyey Iiraan balse maxaa ka mid ah tallaabooyiinka u furan ee uu qaadi karo? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 20, 2019 at 06:27 Weeraradii Sacuudiga: Trump wuxuu ku eedeeyey Iiraan balse maxaa ka mid ah tallaabooyiinka u furan ee uu qaadi karo?2019-09-20T06:27:46+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Iyadoo uu la halgamayo sidii loo sharixi lahaa jawaabta laga bixin karo weerarradii ka dhanka ahaa ceelasha shidaalka ee Sacuudiga, wuxuu madaxweyne Trump ku adkeysanayaa in uu haysto qorshayaal badan.
Wuxuu horeyba u doortay mid ka mid ah arrimaha uu haysto, wuxuu amray xoojinta cunnaqabateynta dhaqaale ee Tehran saaran, iyo sii adkeynta “cadaadiska xoogga leh” ee ka dhanka ah Iiraan taas oo Mareykanka uu ku adkeysanayo in saameyn weyn ay ku yeelatay dalkaas.
Xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka ayaa arrintan ku tilmaamay ficil dagaal, inkastoo Iiraan ay iska fogeysay dhamaan eedaymaha inkastoo illaa iyo hadda ay muuqdaan in si qoto dheer ay Iraan “ugu lug leedahay weerarrka”.
Marka hore waa muhiim in la garto in tallaabo kasta ay noqon karto mid si degdeg ah loo qaado ama in ay waqti qaadato. Waa la iska dayn karaa, iyadoo shacbiyad lagu raadinayo ama wax qarsoon ayey noqon kartaa oo indhaha dadka aysan arkin.
Aragtida ugu horeysa, Sacuudiga iyo Mareykanka waxay qaadayaan tallaabada dhanka shacabka; caddeynta wixii dhacay, soo bandhigidda cidda ku lug leh taas oo hadda u muuqata Iiraan.
Taas waxay u fududeyneysaa shacabka iyo kiiskasta ee sharci ah ee la xiriira jawaabtooda si ay taageero caalami ah ugu helaan tallaabooyiinkooda.
Balse faafaahin badan oo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay, waa in ugu yaraan aysan noqon jawaabta laga bixinayo su’aala muhiim ka ah: Duullaanka ma waxaa laga soo qaaday dhulka Iraan, sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka? Marka la caddeeyo ka dib, muxuu madaxweyna Trump sameyn karaa?
Inkastoo illaa iyo hadda aysan jirin wax faahfaahin ah haddana jawaabtii hore ee madaxweynaha waxay aheyd in uu ku baaqo cunna-qabateenno dheeraad ah.
Shaki kuma jiro in dhaqaalaha Iraan uu dhaawac soo gaaray.
Dad badan oo arrimahaan taxliiliyana waxay sheegayaan in sababta Iraan xilligaan u go’aansan karto in ay duqeyso kaabayasha dhaqaalaha Sacuudiga ay tahay ka jawaabidda dhaawaca dhaqaale ee soo gaaray.
Waxay noqon kartaa digniin la xiriirta in dagaalka dhaqaale ee Washington ku hayso Tehraan ay Iraan ka bixin karto jawaab ka dhan ah Riyaadh.
Weerarrada lagu qaaday Xarumaha shidaalka Sacuudiga waxay banaanka soo dhigeen sida Sacuudiga u nugulyahay.
Waxaa jirtay xilli uu Mareykanku halis u arki jiray in goobaha shidaalka ee Gacanka Carabta weerarro lagu qaado balse arrimuhu way is badaleen oo Mareykanku wuxuu haystaa saliid ku filan.
Wax soo saarka Shidaalka waa arrinta aasaaska u ah in gobolkaas uu noqdo istiraatiiji muhiim ah.
Way adag tahay in la dhoho, iyadoo ay jiraan hadallada adag iyo jiljileeca Boqortooyada Sacuudiga, haddana madaxweyne Trump wuxuu xaqiiqdii weerarradii ugu dambeeyay u arkayaan dhibaateynta danaha dhaqaale ee Mareykanka.
Waxaa cad in uu yahay madaxweyne doonaya in uu soo afjaro dagaallada ay galeen ciidamada Mareykanka, uusanna billaaban dagaal cusub. Waxaa jiro sababo badan oo ah in Sacuudiga uu luminayo saaxiibbo badan oo ka duwan sida uu ugu sii dhowaanayo maamulka Aqalka Cad.
Balse, kaba soo qaad Mareykanka wuxuu go’aansaday in danihiisa caalamka weerrar lagu yahay, muxuu sameyn karaa? arrinta militari iyo meesha la weerarayo way kala duwan yihiin. Su’aasha dhabta ah waxay tahay: Maxay tahay guusha laga gaarikaro adeegsiga awood ciidan?
Waxay noqon kartaa duqeyn loo geysto meelo muhiim ah – sida uu madaxweyne Trump sameeyay markii uu amray duqeynta goobaha hubka kiimikada ee Suuriya taas oo saameyn weyn aanan u geysan Bishar Al-Asad. In ay hubkaas sii adeegsadaanna wax kale kama uusan qaban Trump.
Hadii saameyn militari la go’aansado, haddaba waa in duqeyn kasra si dhow looga fiirsado – waa in qeyb ahaan ay la mid noqoto mid u dhiganta weerarrkii Sacuudiga lagu qaaday, waana in ay noqoto farriin adag oo loo dirayo maamulka Tehran.
Halista Sii kordhaysa
Is difaacidda qof kale, wuxuu midka kale u arki karaan daandaansi. Iraan marna ma aysan muujin in ay baqeyso. Waxaa muuqato halis dhab ah oo la xiriirta xiisadda Mareykanka iyo Iraan in ay ku biyo shuban karto dagaal rasmi ah. Haddaba noocuu noqon karaa?
Waxaa jiro arrimo ay tahay in laga fiirsado, wayna fududahay in la dhoho ‘waxaas baa dhici doona’. Maamulka Trump wuxuu noqon karaa cadowga aan la illaawi karin ee Iraan, balse ma noqon doono dagaal wayn oo cir iyo dhulba looga qaado Iran si dhulka loo dhigo.
Tani ma ahan Ciraaq-dii Sadaam Xuseen. Iraan waa caqabad kale oo sideeda u ballaaran oo aan la loodin karin, militari iyo siyaasad ahaanba. Waxyaabaha uu Aqalka Cad doonayo waxaa ka mid ah isbedel maamul. Taasna waxay u badan tahay in la niyad jebin doono. Haddaba meesha ka saar duullaan militari.
Trump: Ha loo midoobo in aan Iran nukliyeer helin
Maxay ka dhigan tahay in Qadar ay ka qeybgasho shirka Sacuudiga?
Waa suuragal in Mareykanka uu curyaamiyo kaabayaasha militariga Iraan. Balse Iraan way haysataa qaabad ay tallaabada noocaas ah uga jawaabto. Waxay adeegsan kartaa ficillo miinooyiin ah, diridda doomo yaryar oo weerraro qaada ama gujisyo si ay u carqaladeyso howlaha Gacanka Carabta. Maraakiibta SHidaalka ayey weerari karaan, taas oo Mareykanka ku qasbi karta inuu is difaaco.
Iraan, sidoo kale haddii ay dareento cadaadis weyn, waxaa suuragal ah in ay sii ballaariso dagaalkiida iyadoo xoojineysa dagaalkeeda dadban ee Ciraaq, Suuriya iyo meelaha kale si Mareykanka loo weerarro.
Meelaha aadka u sii xagjirka ahna waxay noqon karaan in Xisbullah ay muujiso ayna weerraro madaafiic ah ku qaadaan Israa’iil. Ujeedadu waxa ay noqon kartaa in waxa maamulka Trump uu u arko ciqaab yar oo kooban in ay xaqiiqdii sii hurin karto colaadda hadda ka taagan gobolka.
Waa noocyo ah sii xoojinta weerarrada dhanka, waa dadaallo sirdoon oo lagu wiiqayo arrimaha awoodda siinaya militariga Iraan, iyo kala dhantaalidda xulafadeeda gobolka iyo ururada ay taageerto ee Bariga DHexe.
Balse Markale, dhaqhaqaayada noocan ah xilliganba way socdaan, wayna soo socdeen. Haddana halkan ayey ina keeneen. Iraan wax dhib ah kalama aysan kulmin, inkastoo horumarkeeda dhanka teknolojiyadda la dhibaateeyay.
Tani uma muuqan karto xalka ugu horreeya ee Trump “uu ku dhaqaaqayo”, balse waxay yeelan kartaa faa’iido haddii la raadiyo sidii xaaladdan looga dhigi lahaa mid caalami ah.
Tani waxay u baahan kartaa soo bandhigidda caddeynmo iyo xaqiiqooyiin aad u badan taas oo ah dadaallada “magacaabidda iyo caabeynta” Iraan si go’doominta loo soo xoojiyo.
Dhibaatada halkan waxay tahay in Mareykanka iyo xulafadiisa muhiimka ah ee Reer Galbeedka uu u dhexeeyo khilaaf ah sida loola dhaqmayo Iraan, xitaa haddii ay qiimeyn isku mid ah ka hayaan “dhibaatada Tehraan”.
Reer Yurub waxay weli rajeynayaan filasho aan wanaagsaneyn oo ah in la soo celin karo heshiiskii nukliyeerka ee Iraan. Dalal kale oo badan, oo aan ku koobneyn Ruushka iyo Shiinaha kuwaas oo khilaaf uusan kala dhexeyn Iraan, waxaa ka go’an in tan ay u arkaan “dhibaatada Trump”, waxayna u badan tahay in ay u ololeyndoonaan cadaadis diblumaasiyadeed oo keli ah.
Dabcan waxaa jiri karo qaabab kale oo diblumaasiyadeed oo arrinta lagu wajihi karo si xaaladda kacsan loo dejiyo: Waxay iskudeyi karaan wadahadal.
Ka hor dhacdada weerarrka Sacuudiga lagu qaaday, madaxweyne Donald Trump wuxuu muuijiyay inuu diyaar u yahay la kulanka madaxda Iraan. Taas hadda maba dhici karto, wayna adag tahay in la arko waxa qof Iraan u dhashay faa’iidada uu gudaha dalkaas kaga heli karo kulanka noocaas ah.
« Barcelona Oo Kooxdeeda Ku Dhex Haysata Caqabada Kahor Taagan Heshiiska Neymar & Sharaxaad Cusub Oo Faah-Faahin Laga Helay.
Amiirka Al Shabaab oo ka hadlay murunka Kenya ay gelisay Badda Somaliya »
Shaqaalaha Boeing oo la sheegay in ay sii ogaayeen cilladda haysata nooca 737 Max